Sacuudiga oo oggolaaday inay Haweenka Soomaalida ka xoogsan karaan Sacuudiga. | Dadweyne – U Adeegaha Dadweynaha
Wasaaradda Shaqada ee Dowladda Sacuudiga ayaa si rasmi ah u shaacisay in Haweenka u dhashay dalka Somalia ee khibradda u leh Hawlaha Khadaamooyinka loo oggolaaday inay Xirfadooda uga shaqeysan karaan Guryaha Qoysaska iyo Xafiisyadda Sacuudiga.
Wargeyska Alriyadh ee lagu qoro Luqadda Carabiga kana soo baxa Caasimadda dalkaasi ee Riyadh ayaa qoray inay Dowladda Sacuudiga go’aankaasi u qaadatay, kadib, markii ay Codsiyo ka heleen Rugta Ganacsiga Sacuudiga iyo Shirkadaha iyo Xafiisyadda , oo ay ku dalbadeen in la keeno Adeegtooyin cusub.
Wargeyska waxa uu tilmaamay in Safaaradda Sacuudiga ee ku taalla caasimadda dalka Kenya ee Nairobi loo xil-saaray Hawlaha lagu diiwaan-gelinayo Haweenka Soomaalida ee Shaqo-doonka ah, si ay uga xoogsadaan gudaha Sacuudiga.
Wargeyska, waxa uu qoray in Haweenka Soomaalida danaynayo Shaqooyinkaasi looga baahan yahay inay Wasaaradaha Arrimaha gudaha, Caafimaadka iyo Shaqada iyo Shaqaalaha ee Dowladda Federalka Somalia ka soo qaataan Qoraallo muujinaya inaysan Dembiile ahayn, Caafimaad qabaan iyo inaysan Haweenkaasi yihiin kuwo aan Shaqaale u ahayn Dowladda.
Wargeyska waxa uu xusay in Haweenkaasi looga baahan yahay inay Waraaqaha Sharciga Joogitaanka ka haystaan Dowladda Kenya iyo in Codsiyadda E-mail ahaan loogu dirayo Safaaradda Sacuudiga ee Nairobi.
Madaxa Fulinta ee Xafiiska Wasaaradda Shaqada ee magaalladda Riyadh, Mushaari Al-dafaysni ayaa u sheegay Wargeyska Alriyadh in inta aan Adeegtooyinka cusub la keenin Sacuudiga loo baahan yahay inay Wasaaradda Shaqada iyo Muwaadiniinta doonaya Adeegtooyinka la isla meel dhigo Mushaarkooda, Xilliga Qandaraaska Shaqada dhamaanayo iyo Xuquuqaha kale.
Mushaari Al-dafaysni waxa uu tilmaamay in Adeegtooyinka shisheeyaha ee haatan ka shaqeysta Sacuudiga kala mushaar yihiin.
Dhowr bilood ka hor Dowladda Sacuudiga waxay bilaabeen in ay Haweenka Reer Jabuutiyaanka ee khibradda u leh Hawlaha Adeegtinimo uga shaqeysan karaan Sacuudiga.
Previous: Ambassador Ali Amerika oo iska difaacay Eedeymihii Guddiga QM ee Xayiraadda Hubka ee Somalia.
Next: Jihadiste Somali Maraykan sheegay inuu weli nool yahay